Dalxiiska Seychelles ayaa u diyaargaroobaya IFTM Top Resa ee xiisaha leh ee Paris
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles ayaa u diyaargaroobaya IFTM Top Resa ee xiisaha leh ee Paris
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles oo ku sii jeeda IFTM Top Resa
Dalxiiska Seychelles ayaa ka qeybgali doona bandhigiisii ​​ganacsi ee ugu horreeyey ee qof ahaaneed ee ugu weyn tan iyo markii uu billowday masiibada COVID-19, Marwo Bernadette Willemin, Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Goobta ee Waaxda Dalxiiska, ayaa ku dhawaaqday ka hor inta aysan u ambabixin IFTM Top Resa ka dhacaya Paris Oktoobar 5-8.
Bandhigga ganacsiga safarka wuxuu bartilmaameedsanayaa Waqtiyada firaaqada, Kooxda, Ganacsiga, iyo MICE & Dhacdooyinka qaybaha socdaalka iyo warshadaha dalxiiska.
Joogitaanka Seychelles ee jir ahaaneed ayaa la seegay oo ay muddo dheer sugayeen la-hawlgalayaasheenna.
Tartanka ayaa noqonaya mid aan naxariis lahayn oo maadaama tartamayaashu u furan yihiin dalxiiska, waxaa muhiim noqotay in Seychelles sidoo kale qof ahaan loo arko.
Marwo Willemin ayaa lagu soo biiri doonaa bandhigga ganacsiga socdaalka, kaas oo bartilmaameedsanaya qaybaha Leisure, Group, Business, iyo MICE & Events qaybaha, oo ay matalayaan wakiilada fadhigoodu yahay Paris ee Berjaya Hotels, Adeegyada Socdaalka Creole, LXR Mango House, iyo Safarka Mason. Ka -qaybgalayaasha khadka tooska ah waxaa ku jiri doona Waqooyiga Jasiiradda, Kempinski Seychelles, iyo Blue Safari Seychelles.
Mar ay sharraxaysay soo noqoshada ka-qaybgalka jireed ee dhacdooyinka noocan oo kale ah, Marwo Willemin waxay tidhi, “In kasta oo aannu si joogto ah ula xidhiidhnay iyaga, joogitaankeenna jireed waa la seegay waxaana muddo dheer sugayey lamaanayaasheenna. Waa in aynaan iloobin in tartanku uu noqonayo mid bilaa naxariis ah oo sida tartamayaashayadu u furan yihiin dalxiiska, waxaa muhiim noqotay in sidoo kale naloo arko qof ahaan.
Waxaan leenahay afar maalmood oo ballamo ah oo horeba loogu ballamiyey hawlwadeennadayada dalxiiska ee waaweyn, shuraakada ganacsiga iyo shirkadaha duulimaadyada. Waxaan la kulmi doonnaa saxaafadda iyo warbaahinta goobta ka baxsan. Bandhigu waa mid waqtigiisu ku habboon yahay gaar ahaan booqdayaasha Faransiiska ee la tallaalay mar dambe kuma khasbana inay karantiil galaan marka ay guryahooda ku soo laabtaan taasina waxay dhiirigelinaysaa hawlwadeennada dalxiiska iyo la -hawlgalayaasha kale inay isu keenaan barnaamijyadooda jiilaalka oo ay si firfircoon u iibiyaan fasaxyada Seychelles. Waxaan sidoo kale ku dari doonnaa awoodda fadhiga iyo isku xirnaan dheeraad ah oo u dhexeysa Paris iyo Seychelles mar haddii Air France ay ku taliso laba jeer duulimaad toddobaadle ah oo ku aaddan Seychelles xilliga jiilaalka illaa Oktoobar 28. ”
Sannadkan, bandhigga ayaa loo diyaariyey si loo waafajiyo “ka -qaybgalka isku -dhafan,” ayay tidhi Marwo Willemin, “Annaga, iyo qof kasta oo kaleba waxay ahayd inaan la qabsanno oo dib -u -cusboonaysiinno sida aan ula shaqayno shuraakadayada iyo sida aannu u gaadhno macaamiisheena; sidaa darteed la -hawlgalayaashayada maxalliga ah fursaddan si ay uga qaybqaataan bandhigga ganacsiga gabi ahaanba iyo sidoo kale qof ahaan. Dabcan waxay ahayd inaan hoos u dhigno raadkeenna, marka la eego baaxadda istaaggayaga iyo tirada dadka meesha jooga, waxaanna ixtiraami doonnaa dhammaan tallaabooyinka nadaafadda ee meesha yaal. Kooxdayada Paris ayaa nagu taageeri doonta istaagga. ”
Suuqa Faransiiska ayaa ahmiyad weyn u leh Seychelles, maaddaama suuqa labaad ee hormuudka u ah uu ku deeqay in ka badan 11% soo -booqdeyaasha (43,297) iyo in ka badan 16% dadka Yurub ka yimid 2019.
Dalxiiska Seychelles waxay ku biiri doontaa in ka badan 34,000 xirfadlayaal dalxiis oo matalaya 200 goobood iyo 1,700 oo magac oo ku yaal IFTM Top Resa.
Mudane Daniel Pimental wuxuu leeyahay,
Oktoobar 2, 2021 at 10: 29
Soo-saareha wax kasta oo ka yimid nadiifiyeyaasha robot-ka ilaa dheriyada shaaha elektiroonigga ah ayaa soo saaray laba taleefan oo casri ah illaa hadda sannadkan, iyada oo Mi 11 Ultra ay bixinayso mid ka mid ah dareemayaasha kamaradaha ugu weyn ee abid lagu rakibay taleefanka casriga ah. Si kastaba ha noqotee, celceliska qiimaha iibinta taleefannada casriga ah ee Xiaomi ayaa hooseeya marka la barbar dhigo Samsung iyo Apple, taas oo ka dhigaysa inay soo jiidasho u yeeshaan macaamiisha.